तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव छ
२०७७ जेठ ११ आइतबार ०८:५०:०३ प्रकाशित
दाङको घोराही उपमहानगरपालिकामा बिहीबार एक जनामा कोरोना पोजेटिभ भेटियो। उनी भारतको नयाँ दिल्लीबाट आएको खुलेको छ। भारतबाट नेपाल आउने क्रम अझै रोकिएको छैन। कोरोना संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि क्वारेन्टाइनको भूमिका निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ। अहिले स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय स्तरसम्म क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको छ। तर अधिकांश क्वारेन्टाइन भने सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार नभएको पाइएको छ।
दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले भने आफूले सञ्चालन गरेको क्वारेन्टाइन मापदण्ड अनुसार भएको दाबी गरेको छ। उक्त उपमहागरपालिकामा कति जना क्वारेन्टाइनमा छन्? के–कसरी क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गरिएको छ? लगायतका विषयमा हामीले दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा संयोजक नारायणप्रसाद घर्तीसँग कुराकानी गरेका छौं। प्रस्तुत छ, घर्तीसँग स्वास्थ्यखबरकी कमला गुरुङले घर्तीसँग गरेको कुराकानीः
दाङको घोराही उपमहानगरपालिकामा कति जना क्वारेन्टाइनमा छन्?
अहिले घोराही उपमहानगरपालिकामा ६ सय ७५ जना क्वारेन्टाइनमा छन्।
कति स्थानमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको छ र यहाँहरुसँग कति शय्या क्वारेन्टाइनको क्षमता छ?
क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नका लागि हामीले वडास्तरीय क्वारेन्टाइन बनाएका छौं। विभिन्न विद्यालयहरुमा हामीले वडास्तरीय क्वारेन्टाइन बनाएका हौं। अहिले धेरै मानिस आउने क्रम जारी छ।
उपमहानगरपालिकाका ३९ स्थानमा वडास्तरीय क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरिएको हो। यसलाई थप विस्तार गर्ने तयारीमा छौं। किनभने एकै ठाउँमा धेरै जनालाई राख्दा संक्रमणको जोखिम हुने भएकाले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनका लागि थप विस्तार गर्ने क्रममा छौं। हामीसँग १ हजार ६ सय शय्याको क्षमता भएका क्वारेन्टाइनहरु छन् र दैनिकजसो क्वारेन्टाइनमा मानिस आउने गर्छन्।
हालसम्म क्वारेन्टाइनमा रहेका कति जनाको कोरोना परीक्षणका लागि नमुना संकलन गर्नुभएको छ?
बिहीबार हामीले १७ जनाको नमुना संकलन गर्‍यौं। उनीहरु एक हप्ता पहिले क्वारेन्टाइनमा राखिएका हुन्। जसमध्ये एक जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। उनी भारतको नयाँदिल्लीबाट आएका हुन्। उनको शनिबार दिउँसोपछि कन्ट्याक ट्रेसिङ गर्दैछौं। अन्य बाँकीको भने एक हप्तापछि पिसिआर परीक्षण गछौं।
क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारका लागि के–कस्तो व्यवस्था गर्नुभएको छ?
क्वारेन्टाइनमा रहेका कुनै व्यक्तिलाई कोरोना संक्रमण भए अस्पताल लैजाने व्यवस्था गरेका छौं। संक्रमितलाई बेलझुन्डी कोरोना विशेष अस्पताल र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा लैजाने व्यवस्था गर्छौं।
क्वारेन्टाइनमा आएकाहरु कुन ठाउँका छन् ?
यहाँ क्वारेन्टाइनमा राखिएकाहरु अधिकांश भारतबाट आएका छन्। उनीहरुलाई नै हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखी क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरेका छौं। भारतबाट आउने क्रम अहिले पनि जारी छ। यसले गर्दा हामीलाई क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न निकै समस्या भइरहेको छ। कोरोना संक्रमित बढी भएका नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज लगायतका स्थानबाट आउने व्यक्तिलाई पनि हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरेका छौं।
सरकारले अहिले क्वारेन्टाइन सञ्चालनका लागि विभिन्न मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। तपाईंहरुले ती मापदण्ड लागू गर्नुभएको छ त?
क्वारेन्टाइन सञ्चालनका लागि हामीले स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई परिचालन गरेका छौं। सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार हामीले क्वारेन्टाइन बनाएका छौं। जसमा क्वारेन्टाइनमा हुने शय्याबीचको दूरी कायम गरेका छौं भने अन्य सुविधा पनि उपलब्ध गराएका छौं। उहाँहरु सबैलाई मास्क अनि स्यानिटाइजरको पनि व्यवस्था गरिएको छ। खाना, खाजाको पनि व्यवस्था छ।
क्वारेन्टाइन सञ्चालनका लागि कति जनशक्ति परिचालन गर्नुभएको छ?
यस उपमहानगरपालिकाका १९ वटै वडामा क्वारेन्टाइनको विस्तार गरिएको छ। ती वडाहरुमा रहेका स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीलाई नै हामीले परिचालन गरेका छौं। अहिले ६०/६० जना स्वास्थ्यकर्मीको टोली छन्। उहाँहरु रोटेसनमा खटिनु हुन्छ। एक हप्ता ६० जना र अर्को हप्ता ६० जनाको स्वास्थ्यकर्मीको टोली खटिन्छन्।
क्वारेन्टाइन सञ्चालन गरिरहँदा आएका समस्या र चुनौती केके छन्?
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण अहिले विश्वकै मुख्य एजेण्डा बनेको छ। त्यसैले हामी सबै जना यसलाई नियन्त्रण गर्न एकजुट हुनु आवश्यक देखिन्छ।
स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारबीच सहकार्य र समन्वयको अभाव छ। त्यो हामीले महसुस गरेका छौं। कोरोनाको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि यी तीन तहका सरकार जसरी मिलेर अघि बढ्नु पथ्र्यो, त्यसो भइरहेको छैन। हामी अहिले जसरी खटिरहेका छौं, त्यसको मूल्यांकन गरेर सकिँदैन।
अहिले क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापनमा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी दैनिक क्वारेन्टाइनका लागि खटिरहेका छन्। पिपिईको अभाव छ। काम गर्दै जाँदा कतै अलमल पनि भएको जस्तो लाग्छ। हामीले आफ्नो क्षमता र स्रोत–साधनले भ्याएसम्मका गरेका छौं। यहाँका जनप्रतिनिधिहरु पनि उत्तिकै खटिरहनु भएको छ।